संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन कहिले ? आयोगले थाल्यो यस्तो तयारी - अन्नपूर्ण टाइम्स
संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन कहिले ? आयोगले थाल्यो यस्तो तयारी
३१ जेष्ठ २०७९ मंगलवार १८:५८
निर्वाचन आयोगकोद्वारा असार १ गतेदेखि सुरु गर्न लागेको मतदाता नामावली सङ्कलनको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल र साथमा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल । तस्वीर ः प्रदीपराज वन्त
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर पहिलो सातासम्म संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन गर्ने गरी तयारी सुरु गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आसन्न संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन आगामी मंसिर पहिलो सातासम्म गर्ने गरी आन्तरिक तयारी सुरु गरिएको जानकारी दिए।
आयोगको कार्यालयमा मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा मंसिरको पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिएको पनि बताए।
आयोगले सरकारलाई निर्वाचन कानुनबमोजिम दिएको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएकोले आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ थियो।
‘आन्तरिक र अनौपचारिक छलफलमा अहिले पनि आयोग एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा नै छ। एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा मंसिरको पहिलो सातासम्म गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा सरकारलाई निर्वाचन कानुनबमोजिम आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएकोले परामर्श गरिरहेका छौँ।’
शर्माले आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम सुरु गरिने पनि जानकारी दिए।
सबै निर्वाचन कार्यालयहरु र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा ७३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम सुरु गरिने उनले बताए।
आयोगले हाल अस्थायी बसोवास गरिरहेकै जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा गएर मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार मतदाताले नामावलीमा रहेको नाम, ठेगाना, जन्ममिति लगायतका विवरण सच्याउनलाई प्रमाणसहित निवेदन दिएमा आवश्यक निर्णय गरी त्रुटि सच्याउन सक्नेछन्।